James Swan oo madaxweynaha Galmudug ku dhiirri galiyay inuu sii wado isku dayga lagu xallinayo khilaafka doorashada | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	James Swan oo madaxweynaha Galmudug ku dhiirri galiyay inuu sii wado isku dayga lagu xallinayo khilaafka doorashada
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Jamed Swan, ayaa madaxwenynaha Galmudug, Axmed Qoorqoor ku ammaanay isku dayga lagu xallinayo khilaafka ka dhashay hirgelinta qorshaha doorashada.
“Waxaan mar kale ku ammaanayaa dadaalka Madaxweyne Axmed Kaariye ee isku dayga lagu xallinayo khilaafka ka dhashay hirgelinta qorshaha doorashada, waxaana ku dhiirrigeliyey inuu sii wado doorka uu ka qaadanayo joogteynta xiriirka u dhexeeya madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Federaalka”, ayuu yiriJames Swan .
Wuxuu ku celiyey aragtida beesha caalamka ee ah “is afgarad, wax wada qabsi, iyo wax walba laga hormariyo wanaaga dalka, si loo hubiyo in Soomaaliya ay ku sii socoto wadada cad ee nabadda iyo xasiloonida.
“Waxaan ka codsaneynaa dhamaan hogaamiyaasha Soomaaliya in ay sameeyaan dadaal kasta oo ay ku galayaan wadahadal loo dhan yahay, si doorashooyinka qaranka loogu qabto is afgarad balaaran, oo salka ku haya heshiiskii Sebtember 17-keedii, ayuu hadalkiisa ku daray Swan.
James Swan oo madaxweynaha Galmudug ku dhiirri galiyay inuu sii wado isku dayga lagu xallinayo khilaafka doorashada was last modified: January 25th, 2021 by Admin
Akhriso:- Khasaaraha ka dhashay qaraxa ka dhacay duleedka Muqdisho
Akhriso:-Hoggaamiyeyaashii Al-Shabaab ee Gobolada Baay iyo Gedo oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya